“Waxaan isleeyahay Kulmiye wuu niyad jabay” Cabdiraxmaan Cirro
Home WARARKA “Waxaan isleeyahay Kulmiye wuu niyad jabay” Cabdiraxmaan Cirro
Berbera(Berberanews): Murashaxa Madaxweynaha Xisbiga WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cabdiraxmaan-Cirro) ayaa tilmaamay Xisbiga KULMIYE inuu niyad-jabay oo uu quustay, isla markaana uu rafanayo.
Sidaa waxa uu Cabdiraxmaan-Cirro ku sheegay mar uu maanta kumanaan taageerayaasha Xisbiga WADDANI kula hadlayay Magaalo Xeebeedka Berbera.
“Waxaan isleeyahay Kulmiye wuu niyad jabay, wuu quustay, sidaa awgeed wuu rafanaya. Waxaad ka war qabtaan in maalin dhawayd la isku dayay in xarunta Waddani ee Hargaysa la gubo oo taayirro ololaya lagu tuuray. Waxaad ka war qabtaan in gurigayga la weeraray, waxaad ka war qabtaan in bannaan bixii u dambeeyay Hargeysa lagu burburiyay in ka badan 40 gaadhi, waxaad ka war qabtaan in magaalada Oog la yidha Kulmiye 8 hablood oo Waddani ah ku dilay oo ay dhakhtarka Burco yaallaan, Hargeysa qaar baa midiyo la galiyay, intaas oo calan ayaa laga goostay xafiisyada Waddani laakiin, ma rabno in aynu Kulmiye oo kale noqono.”Ayuu yidhi Cabdiraxmaan-Cirro.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi“ Waxaan idinkula dardaarmaya in aynu nabadda ka shaqayno, dardaarankeenu waa nabad waa nabad waa nabad, waa dulqaad waa dulqaad. Waxaynu u diyaar garoobayna codaynta oo codka ayaynu ku kala baxayna, waxyaabaha dhacaya na cabsi gelin maayan, waxaanu u tudhayna dalka iyo dadka, waxaanu ilaalinayna in la isku dhaco, waxaanu hubna in aanu doorashada helayno,”
Previous articleGuddiga doorashada ee Kenya oo ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta la doortay
Next articleHaweenka Sucuudiga oo loo ogolaaday inay ciyaaraha daawadaan